Alterian guzobere Social Media Marketing Council | Martech Zone
Monday, October 19, 2009 Fraịde, Ọktọba 16, 2009 Douglas Karr
na DMA '09 na San Diego, Onye Alteria kwupụtara mwepụta nke Social Media Marketing Council.
SMMC ga-enye ntuziaka, akwụkwọ na ndụmọdụ kacha mma maka otu dị iche iche na ụdị data ọ na-anabata site na mgbasa ozi mmekọrịta, yana otu ha kwesịrị isi jiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka ọgbọ ndu na ndị ahịa.
A ga - enwe ntanetị n'ịntanetị iji nye ohere ịnweta ihe ndị a, nke ga - agụnye mkparịta ụka na ohere maka ụlọ ọrụ iji gosipụta na ha na - egosipụta omume kachasị mma. Ndị kansụl ahụ ga-ezukọ maka oge mbụ na DMA na San Diego ma emesịa n'otu ụzọ n'ụzọ atọ iji tụlee ihe kachasị ọhụrụ na oghere a, na ebumnuche mbụ iji kọwaa ihe mejupụtara ojiji nke ozi mgbasa ozi mmekọrịta.
SMMC ga-eme ụfọdụ nnukwu ihe maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta:
Mepụta ọdịnaya bara uru maka ụlọ ọrụ, ndị ahịa na ụdị.
Mepụta omume na ụkpụrụ kacha mma gbasara nzuzo na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nyere ndi oru mgbasa ozi mgbasa ozi aka na nsogbu na ohere banyere ojiji data.
Nke a kwesịrị ịbụ ezigbo akụ ma enwere m olile anya na ọ ga-agbaso ụkpụrụ ụfọdụ ndị ahịa nwere ike iji, yana, nyochaa ọtụtụ narị ngwa ndị na-apụta kwa ụbọchị.
Ndị kansụl ahụ nwere ụfọdụ ndị ọkpọ dị arọ - Otu DMRS, Nkwado, Merkle, Ebumnuche, Onye Alteria, Ikwerre, Epsilon na Harris mmekọrịta.
Ọkt 19, 2009 na 4:58 AM
Kedụ ka ụyọkọ ụlọ ọrụ nzi ozi email / email na-anọchite anya mgbasa ozi mmekọrịta ka ha wee lelee otu kansụl mgbasa ozi mgbasa ozi? Ha ga "enye ntuziaka, akwụkwọ na ndozi ndụmọdụ kachasị mma" dabere na ahụmihe dị a ?aa? Agara m na ebe nrụọrụ weebụ ha ma ọ bụghị otu onye na-ekwukarị mgbasa ozi ọha na eze dị ka onyinye ọrụ, ọ bụ ezie na ọ bụ isi ike. Sụọ akwụkwọ m… anaghị m ahụ njikọ ebe a.
Ọkt 19, 2009 na 2:51 PM
Ekwenyere m na afọ iri nke ịnakọta na ịchịkọta data ndị ahịa ga-enye ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọha na eze ọtụtụ nghọta banyere ibu ọrụ nke data na nzuzo. Ekwetaghị m na ndị folks a na-anwa ịjụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ha na-agagharị na iji ọrụ data arụ ọrụ na mgbasa ozi.
Na-agwa kwa nwa okorobịa bịara n’ahịa ahịa, akwụkwọ ozi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọdịnala. Enwere m ike ịgwa gị na itinye ihe niile m mụtara na ụlọ ọrụ ndị ahụ nyere m ụkwụ m na ndị otu m kpebiri na otu ụbọchị ha bụ uru mgbasa ozi mmekọrịta. Anọ m na-arụ ọrụ itinye ego data na teknụzụ maka afọ 20 ugbu a.
Ọ bụ mara m anya na Facebook na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ media ụlọ ọrụ na-enweghị a aidia mgbe ọ na-abịa ahịa… n'agbanyeghị na ha na-enye a zuru okè ụgbọala maka ya.
Ọkt 20, 2009 na 12:22 PM
Ana m akwado gị n'ezie na SMMC ga-enye ụkpụrụ nduzi, akwụkwọ na ndụmọdụ kachasị mma maka ndị otu. Lee, enweghị m ike ijide ihe SMMC ga-eme ihe maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta.